CABDIQASSIM OO TAGAY SHARM EL SHEIKH
Sharm El Sheikh, 28th February 2003,
Madaxa Dawladda KMG ah ee Soomaaliya Cabdiqassim Salaad Xasan iyo wefdigii uu hogaaminayay ayaa maanta galinka danbe gaaray magaalada Sharm El-Sheikh ee dalka Masar , si uu uga qaybgalo shirka aan caadiga ahayn ee madaxda dalalka ku jira Jaamicadda Carabta oo berrito oo Sabti ah (1da Maarso 2003 ) ka furmi doona magaaladaas .
Mudane Cabdiqassim Salaad Xasan iyo wefdigiisa waxaa ay xalay ku hakadeen magaalada Dubai , halkaas oo ay isku arkeen Ra’iisul Wasaare Xasan Abshir Faarax oo beryahanba booqasho gaar ah oo la xiriirta caafimaadkiisa ku joogay dalka Imaaraadka . Waana markii ugu horreysay ee kulan dhexmaro Cabdiqassim iyo Xasan Abshir tan iyo bilowgii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ee 2002 , markaas oo uu Xasan Abshir u yimid ka qaybgalka shirkii nabad raadinta Soomaalida ee lagu qabtay magaalada Eldoret ee dalka Kenya . Ilaa iyo waqtigaana kuma aysan laaban Ra’iisul Wasaare Xasan Abshir iyo Guddoomiye Cabdalla Deerow Isaaq dalka gudihiisa .
Cabdiqassim Salaad Xasan waxa uu dalka Malaysia kaga soo qayb galay shirweynihii 13aad ee madaxda dalalka dhexdhexaadka ah oo habeen hore lagu soo gunaanaday magaalada Kuala Lampur , waxaana wefdigiisa ka mid ahaa Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Dawladda KMG ah Yuusuf Xasan Ibraahim (Yuusuf Dheeg) iyo Wasiirka Maaliyadda Xuseen Maxamuud Sheikh . Wuxuu kaloo booqasho saddex cisho ah ku tagay dalka Qadar intaan shirka Malaysia bilaaban .